FIFA oo Siminaar Muqdisho ugu furtay garsoorayaal Soomaaliyeed +SAWIRRO – Gool FM
FIFA oo Siminaar Muqdisho ugu furtay garsoorayaal Soomaaliyeed +SAWIRRO
jilacow September 25, 2017
(Muqdisho ) 25 Sebt 2017.Hotelka Saxafi ee Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay Siminaar heerkiisu sareeyo kaasoo sare loogu qaadayo tayada garsoorayaasha Soomaaliyeed.
Siminaarkaan ayaa waxaa bixinaya barayaal ka socodo FIFA oo kala ah MR Felix oo ka yimid Zimbabwi iyo Mbacke Mademba ka socda Senegal.
Masuuliyiin ka tirsan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo uu hoggaaminayo C/qani Saciid Carab, Wasiirka Wasaaradda dhalinyarda iyo Isboortiga Marwo Khadiijo iyo marti sharaf kale ayaa ku sugneyd halka Siminaarka uu ka furmayay.
Waxaa goobta laga jeediyay qudbado kala duwan oo lagu dhiiro gelinayo garsoorayaasha da’da yar ee loo qabtay Siminaarka FIFA MA Course kaasoo ka furmay muqdisho
Guddoomiyaha xiriirka kubada cagta Soomaaliya C/qani Saciid Carab oo goobta ka hadlay ayaa yiri” waxaan u mahad celinayaa madaxweynayaasheena Infantino iyo Ahmed Ahmed, si la mid ah barayaasha FIFA ee bixinaya aqoon kororsiga, sidoo kale waxaan mahad gaar ah u soo jeedinayaa Wasaaradda dhalinyarada iyo Isboortiga oo dadaal ku bixisay in macallimiin Ajinabi ah loo ogolaado in dalka ay soo galaan waxne ay baraan garsoorayaasheena .
Geesta kale Mbacke Mademba oo ah macallin ka socda FIFA ayaa yiri “ Waan salaamayaa Marwada Wasiirka ciyaaraha ah, Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, xubnaha golaha fulinta waxaan farriin idinkaga sidaa Madaxweynaha Fifa Infantino, iyo Madaxweyne Ahmed Ahmed hoggamiyaha CAF waxa ay qirsan yihiin shaqada muuqata ee ka socota Soomaaliya.
“Waxaan halkan u joognaa in aan Kooras u furno garsooreyaasha dhallinyarada ah ee Soomaaliyeed, farxad ayey ii tahay aniga in aan fursaddaan helo, aan halkan ku joogo waxaan idin sheegi karaa in aan aad ugu faraxsanahay in aan halkan joogo.
Ugu dambeyn Wasiirka wasaarada dhalinyarda iyo Isboortiga Marwo Khadiijo oo furtay Siminaarka soconaya afarta maalin ayaa tiri” Cidna caad kama saarna wax qabadka xiriirka kubadda cagta, waa xiriir indho u ah Soomaaliya waan ku amaanayaa shaqadooda qurxoon.
Sikastaba Waa markii afaraad oo Siminaar nuucaan ah lagu qabto Soomaaliya, waxaana ka qeyb qaadaneysa 30 garsoore oo isugu jiro heer caalami, heerka koowaad,labaad iyo Saddexaad.
W/D:Mahad Shariif Jilacoow
“Adigaa ka fiican Harry Kane.”. Morata oo la dhacay HEESTA Cusub ay u sameeyeen taageerayaasha Chelsea
RASMI: Daa’uud Tubaal oo ku biiray Elman...+SAWIRRO